Semalt: 8 Black Hat SEO tetikady izay afaka manimba ny orinasa
Isaky ny miditra amin'ny orinasa SEO amin'ny tetikasa vaovao ianao, dia mila mijery ny fomba fanao ara-pihetsik'izy ireo indrindra indrindra mikasika ny tetika mainty hoditra. Ny Black Hatao SEO dia mampiditra lanjany kely fotsiny amin'ny fampielezan-kevitra SEO anao amin'ny ho avy.
Manazava an'ity lahatsoratra ity i Igor Gamanenko, mpitantana ny Success Suisse amin'ny 10 (Semana), ato amin'ity lahatsoratra ity: 8 tetikady mainty iombonana izay tokony hijanona foana ny mpanjifa:
Mampiasa rindrambaiko mba hamoahana ireo karazan-javatra maromaro amin'ny lahatsoratra tany am-piandohana. Azo atao izany amin'ny alàlan'ny famerenana ny teny miaraka amin'ireo voambolana ao amin'ny lahatsoratra. Ny rindrambaiko dia miantoka tonon'ireo lahatsoratra izay toa mahomby amin'ny fijery voalohany. Na dia izany aza, ireo lahatsoratra ireo dia tsy dia misy dikany loatra ary tsy misy vidiny. Matetika izy ireny dia mitarika sazy henjana amin'ny fitadiavana . Ny artikla mirongatra dia hahazo ny tranonkala voarara ho tsara mba tsy hilazana filalaovana fikarohana tsy mahomby.
2. Fametrahana fanaraha-maso ny tranonkala
Ny fanaraha-maso ny tranonkala dia manara-maso ny fahasalamana ankapobe ao amin'ny tranonkalanao ary manala ny fahalemena izay mety hahatonga ny moto mpanodina ambany. Ny tranonkala iray dia hanana fifanoherana foana, indrindra aorian'ny fanavaozana. Ny filalaovana ny maha-zava-dehibe ny fanaraha-maso ny tranonkala dia miteraka fahavoazana goavana mandritra ny fotoana maharitra, satria ny hevi-baviny tsy hita maso tsy misy fanaraha-maso.
3. Directory Fanolorana
Ny fanolorana anarana dia tokony atao mandrakariva ao amin'ny tontolo voafetra. Ny fitsipika 'tsaratsara kokoa' dia tsy maintsy atsipy ivelan'ny varavarankely mba hisorohana ny mari-pamafam-pitenenana mavesatra izay azo antoka fa handratra ny '
4. Ny Google dia tsy hitazona ny fitoviana
Indraindray ireo orinasan-tseratsin'ny SEO dia manamaivana ny tanjaky ny fitaovam-pitadiavana tahaka ny Google. Ny jeneraly tech dia manana injeniera sy rafitra marobe mba hanasonia ny tetikady mainty SEO rehetra, ary ny mpividy tranonkalan'ny vidin'ny vola alaina dia sarotra. Ny tranonkala iray dia mety hivoaka ny lisitra na ny devaluation avy hatrany.
5. Momba ny fitakiana voalohany
Ireo mpirotsaka SEO dia manjavozavo loatra. Raha toa ka singa SEO ny singa fototra, ny tanjona farany dia tokony hijanona foana ny fiovan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ho amin'ny fivarotana. SEO dia fampiasam-bola, ary tsy maintsy mitondra fiverenana any amin'ny orinasa izy ireo, noho izany, ny mpivarotra dia tokony hanatsara ny lanjan'ny tenimiafina.
Maro ireo orinasa no iharan'izany. Misy ny fananana hahazo ny tolotra SEO momba ny fampielezan-kevitra ary handoa indray raha ho tanteraka ny vokatra tadiavina. Na dia izany aza dia mety ho tratran'ny teny fanararaotana ambany tsy misy vidiny izay mety tsy hitondra ny tsenam-barotra ho an'ny tranonkalanao. Ny orinasa toy izany koa dia mamela ny tranokalanao ho an'ny filaharana fohy.
7. Mividy lahatsoratra mora
Tsy ilaina ny mividy lahatsoratra mora vidy sy azo alaina an-tserasera raha afaka manoratra lahatsoratra tsara kokoa ianao. Tadidio fa ny votoatiny dia mpanjaka, ary mila mampiroborobo ny marika amin'ny votoatim-pahamarinana sy hatsaràna ianao. Soraty ny votoatin'ny tenanao na manofa mpiasa matihanina izay afaka mamokatra votoaty tsara.
Ny pejy Torolalana dia mamela ireo tranonkala hanatsara ny tranonkala tsirairay amin'ny fehezanteny iray manokana amin'ny teny fototra. Ireo varavarana ireo dia mitarika ny mpiserasera amin'ny tranonkalan'ny vohikalam-baovaon-drakitra ary mahasosotra ny mpampiasa tranonkala. Ankoatra izany, lahatsoratra tsy misy lanjany izy ireo, ary mahita ny pejy eo amin'ny vavahady i Google amin'ny kely indrindra. Ny fampiasana betsaka an'io tetika io dia mitarika ny filaminana ambany kokoa ary na ny sazy aza Source .